ကဗျာချစ်သူ (ခေးရော့စ်): သေခါနီး ဆယ်ရက်အလို chaos ၏ ကယောင်ကတမ်း ဖွင့်ဟချက်များ
ရှာရှာ ကြံကြံလဲ တက်တတ်ပါတယ်။ မသေခင် ဆယ်ရက်အလိုတဲ့။ ကဲ….ယိမ်းနွဲ့ပါး က ကိုမိုးကြယ်ရေ။ စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်း လက်ကသွားတဲ့ အတိုင်းရေးလိုက်ပြီနော်။ အင်း……။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ကျွန်မက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက “ချူချာမယ်” (ပန်းကန်ပြားမယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော် အဟတ်) ဆိုတဲ့ ဘွဲ့နာမည်ကို မလိုချင်ပဲ ပိုင်ဆိုင်ထားရတာ။ ခုချိန်ထိပေါ့။ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ရောဂါတွေ အလျှိုလျှိုနဲ့ ဘယ်ကနေမှန်းမသိဘဲ ၀င်ဝင်လာတတ်လွန်းလို့ လူများတကာရဲ့ “အဲ့လောက်တောင်ပဲ ပျော့ရလား? အားအားရှိဖျားနေတယ်နော်? ဒီလိုမျိုးသာဆို အသက်ကြီးရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? နင်တော့ မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်?” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ အောက်မှာ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ ပြန်ဖြေစရာ စကားမရှိခဲ့ပါဘူး။ မောင်နှစ်မသားချင်း အရင်းအချာဆိုတာ တစ်ယောက်တစ်လေမှ မရှိတဲ့ ကျွန်မ၊ မိဘတွေရဲ့ ပုံအောပြီး ချစ်တဲ့ အချစ်တစ်ခုကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ပိုင်ဆိုင်လို့ စိတ်ပျက်စရာ နေ့ရက်တွေကို အားတင်းပြီး ကျော်လွှားနေရတယ်။ သေမင်းဆိုတာ မျက်နှာမလိုက်တတ်ဆုံးသော၊ ဘာနဲ့မှ လာဘ်ပေးလို့ မလွှတ်မြောက်နိုင်သော အမှန်တရားရဲ့ ခါးသီးတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကြီးပေါ့။ တကယ်လို့များ သေမင်းက မဆိုင်းမတွ လက်မရွံ့ဘဲ တစ်ချောင်းတည်းသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ အသက်ကို နှုတ်ယူမယ်ဆိုရင်လဲ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ ဆယ်ရက်ပဲကျန်တော့မယ့် အချိန်ကို ရောဂါဆိုးဆိုးရွားရွား တစ်စုံတစ်ရာနဲ့ နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကို အိပ်ရာထက်မှာ ခံစားပြီး မကုန်လွန်ချင်ဘူး။ ကိုယ့်အနီးနားက ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ လူတွေ မျက်ရည်လည်ရွဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် ဝေဒနာခံစားနေရတာကို မမြင်စေချင်ဘူး။ မမြင်ခိုင်းရက်ဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ သူတို့ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မခွဲနိုင်ဘူး။ မခွဲရက်ဘူးလေ။
Posted by Chaos at Sunday, September 14, 2008
မိုးကြယ် September 14, 2008 at 8:52 PM
Republic September 15, 2008 at 11:30 AM
မင်္ဂလာပါ ခေးရော့စ် ရေ ၊၊ လာဖတ်တာပါ ၊၊ အရေးခက် အတွေးခက်တဲ့ ပို့စ်ပါပဲ ၊၊ ကဗျာ လေးနဲ့ ပုံဖော်တဲ့ စိတ်ကူးလေး ကောင်းတယ်ဗျာ ၊၊
su wai September 15, 2008 at 3:25 PM
ခေးရော့စ်အတွက် ဒီခေါင်းစဉ်လေး ရေးရတာ အကျိုးရှိသလို ဆုဝေအတွက်လဲ ခေးရော့စ်ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်ရတာ အကျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကြုံရမယ့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ကြိုမြင်ယောင်လိုက်ရသလိုပါပဲ။ ဆုဝေဆိုရင်လဲ နောက်ဆယ်ရက်မှာ သေမယ်လို့များ သိနေခဲ့ရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီး အစီအစဉ်တကျ လုပ်ဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဘုရားကို အာရုံပြုတာကလွဲရင်ပေါ့။ အကောင်းဆုံးကတော့ လက်ရှိအချိန်လေးတွေကို တန်ဖိုးထားပြီး အမှားကင်းနိုင်သမျှကင်းအောင် နေသွားဖို့ပဲနော်။
လင်းဦး(စိတ်ပညာ) September 16, 2008 at 2:27 AM
"သေမင်းဆိုတဲ့ ကိုရုပ်ဆိုး မလာခင် စုတ်တံတစ်ချောင်းနဲ့ လှပတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ် ခြယ်မှုန်းထားမယ်။"
ကောင်းလိုက်တဲ့ အရေးနဲ့ အတွေး။
saungyunela September 16, 2008 at 9:34 AM
လင်း September 17, 2008 at 10:03 AM
သေခြင်းတရားကို မြင်ကြည့်လို့ ရအောင် ဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာလေးက တကယ့်ကိုကောင်းတယ်။
မစ်(စ်)သွန်းသွန်း September 20, 2008 at 8:50 AM
ကဗျာလေးကောင်းလိုက်တာ။ ဒါနဲ့ တို့ဘလော့ဂါကိုရုပ်ဆိုးကြီးက အလိုလိုသေမင်းဖြစ်သွားပါရော့လား..ခွိခွိ။
ဝေလေး September 20, 2008 at 2:32 PM
ဟိုတစ်ခါလာတော့ ဖတ်လို့မရတာနဲ့မမန့်ခဲ့ရဘူးမမ. ခုမှပဲဖတ်လို့ရတော့တယ်.. မိုက်တယ် ကဗျာလေးနဲ့ ပြောပြသွားတာ.. စိတ်ကူးကောင်းတယ်.. :P
ဟုတ်သားး တို့အစ်ကိုကြီး ရုပ်ဆိုး.. သေမင်းဖြစ်သွားတယ် ဟိ ဟိ.. :P :D :)
နှင်းပွင့်ဖြူလေး September 21, 2008 at 3:29 AM
ကယောက်ကတမ်းနဲ့ ဖွင့်ဟ တယ်ဆိုလို့ မမှန်ဘူးလို့ သတ်မှတ်တယ်ကွာ..
မကျေနပ်ရင် ဂျီတော့ မှာလာ ဟိုင်း...... :P
ကဗျာဆရာမလို့ကို မပြောရဘူး....... ဒီလိုကဗျာတွေ ပြန်ဖတ်ရတော့ ၀မ်းသာဒယ်ကွယ်
layma October 5, 2008 at 11:36 AM
ကဗျာနဲ့သေပြသွားပါလား... အဲလေ.. ယောင်လို့... ရေးပြသွားပါလားလို့ ပြောတာပါ ...။
အတွေးတွေ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ရင်း သေသွားမှာလား ...။ ဟုတ်မှာပါ...။